ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ သမိုင်း
သျှင်ဥက္ကဋ္ဌသို့ ပြန်ကြားချက် (A Reply to Shin Okkahta)
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာ ခေတ်မှီစာပေတိုက်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ လက်ရှိ လူနေမှု အဆောက်အအုံတခု၌ ယုံကြည်ရင်းစွဲ ဝါဒများကို အများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ ပြောရဲဆိုရဲ ဟောကြားရဲသော ပြုပြင်ရေးသမား (Reformist) ရီဖောန်မစ် တဦး ဖြစ်သူ သျှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်များကို 'ဆန်းလွင်' နဲ့ 'တက္ကသိုလ် အံ့ကျော်' က ဝေဖန်ဆန်းစစ် ရေးသားထားတဲ့ ဖီလိုဆိုဖီ အမြင်သစ်ဖြင့် "သျှင်ဥက္ကဋ္ဌသို့ ပြန်ကြားချက်" (A Reply to Shin Okkahta) စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၈၅၅ ကီလိုဗိုက် (855.0 kB) - ဖိုင်အမျိုးအစား ပီဒီအက်ဖ် (application/pdf) ငရဲနှင့် နတ်ပြည် (Hell and Heaven)
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် သာသနာပြုသင်တန်း စာစဉ်အဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့၊ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဓမ္မာစရိယ၊ ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူး၊ မဟာဝိဇ္ဇာ (လန်ဒန်)၊ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ ကျောင်းအုပ်၊ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ရေးသားပြုစုတဲ့ "ငရဲနှင့် နတ်ပြည်" (Hell and Heaven) စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၈၆၃.၈ ကီလိုဗိုက် (863.6 kB) - ဖိုင်အမျိုးအစား ပီဒီအက်ဖ် (application/pdf) တမလွန် - (သျှီ)အင်ကြင်း
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား
(၅၇.၁)ကီလိုဗိုက်။ (57.1)KB Pdf file application ကညင်ပင် ဘုတ်သူရဲ - တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိ(ဓမ္မာစရိယ-ဘီအေ)
တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိရေးသားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၄.၄)ကီလိုဗိုက်။
(34.4)KB Pdf file/application. သနားစဖွယ် တစ္ဆေသူရဲ - အေးရွှေ(ကေတုမတီ)
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား
(၅၁.၃)ကီလိုဗိုက်။ (51.3)KB Pdf file/application. လူကို လှည့်ဖြားခေါ်ဆောင်သွားသော ကြပ်တစ္ဆေ - ကျိုက်ထော်ခင်မိုးအေး(ဘီအေ)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၀.၆)ကီလိုဗိုက်။ (30.6)KB Pdf file/application. အမျှဝေ၍ တစ္ဆေဘ၀မှ ကျွတ်လွတ်ခဲ့ရသော ကိုရင်ကြီး - မောင်စန္ဒ(နယ်စပ်အဏ္ဏဝါ)
သနားစဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၈.၇)ကီလိုဗိုက်။
(38.7)KB Pdf file/application. နာနာဘာ၀နှင့်တွေ့ဆုံဖူးသူများ(၃)- အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဖြစ်ရပ်မှန် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ
ရွယ်အစား(၇၈.၄)ကီလိုဗိုက်။ (78.4)KB pdf application. နာနာဘာ၀နှင့်တွေ့ဆုံဖူးသူများ(၅)- အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ်(ခုနစ်နှစ်ပြည့်အထူးထုတ်) သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော​ဖြစ်ရပ်မှန်
ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၅.၀)ကီလိုဗိုက်။ (55.0)KB Pdf application. ဝေမာနိကခြေရာ - ပညာဗလ
၂၀၀၃-ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင်ထုတ်ဝေသော သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၁.၃)ကီလိုဗိုက်။ (61.3)KB Pdf application. ပြိတ္တာဦးသာကွယ် - အရှင်တေဇနိယ(ဓမ္မဒူတတောရ)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၀.၅)ကီလိုဗိုက်။ (30.5)KB Pdf application. တမလွန်ဘ၀မှ မိုက်နောင်တ - ဆရာတင်စိန်-ဥပဒေ(ကညွတ်ကွင်း)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၁.၂)ကီလိုဗိုက်။ (41.2)KB Pdf application. ဖြစ်သင့်သော အကြောင်းတရားများ - ခင်(တောင်ကြီး)
၂၀၀၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်
အရွယ်အစား(၄၉.၃)ကီလိုဗိုက်။ (49.3)KB Pdf application. ရာဇ၀င်ထဲက တစ္ဆေများ(၁) - ကြည်ဦး
၂၀၀၃-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိ​သော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အ
ရွယ်အစား(၆၃.၇)ကီလိုဗိုက်။ (63.7)KB Pdf application. အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ သမိုင်းအကျဉ်း - ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မဿာမိ (oxford)
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် အပ္ပမာဒမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးကိုပြန်လည်စာစီစာရိုက် ပြီးတင်ပြထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၁.၈)ကီလိုဗိုက်။ (81.8)KB Pdf file application. အင်းဖလောင်းမှ ကိုဖိုးထင် - ကြည်ဦး
အရွယ်အစား(၅၄.၆)ကီလိုဗိုက်။ (54.6)KB Pdf file application. ပရလောကသားများ၏ကယ်တင်ရှင် - မဟာနွယ်(မန်းတက္ကသိုလ်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၂.၀)ကီလိုဗိုက်။ (62.0)KB Pdf file application. ပြေးမလွတ်သာ - ကျော်တေဇ(လှိုင်းဘွဲ့)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၃.၂)ကီလိုဗိုက်။ (33.2)KB Pdf file application. ဖွားသီလသင်းချိုင်းက သရဲ - ရွှေကြိုးကြာ(ညောင်ခါးရှည်)
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင် အရွယ်အစား(၄၂.၃)ကီလိုဗိုက်။ (42.3)KB Pdf file application. ကျင်ငယ်နံ့မခံနိုင်သော ရုက္ခစိုး - မောင်မြတ်မွန်(ဆူးလေ)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၆.၈)ကီလိုဗိုက်။ (36.8)KB Pdf file application. ရွှေထီးလှူမှ ကျွတ်ခဲ့ရသည့်ဦး​ရွှေဟန် - ထီးချိုင့်မြတ်မိုး
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၉.၆)ကီလိုဗိုက်။ (39.6)KB Pdf file application. သီ​ရိဓမ္မာသောကမင်းကြီး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ် မှတ်တမ်းလွှာ - လယ်တီအရှင်ကေလာသ
၁၉၉၂-ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာပြည်စာအုပ်တိုက်မှ ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်
ပါသည်။ သာသနာ​တော်တွင် ထင်ပေါ်​ကျော်ကြားခဲ့သော အသောကမင်းကြီး၏နောက်ဆုံး
သေခါနီးအဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၂၈၇)ကီလိုဗိုက်။ (287)KB Pdf file application. သာသနာ့အောင်လံတော်ကို တီထွင်သူ (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်မှူးကြီးအောလ်ကော့ - အရှင်ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ(သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
အပ္ပမာဒမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သာသနာ့အောင်လံတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ရေးသားတင်ပြထား သောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်စား(၆၄.၆)ကီလိုဗိုက်။ (64.6)KB pdf file application. စိတ်ပညာသမားနှင့်တရားထိုင်ခြင်း - အောင်၀င်း(စိတ်ပညာ)
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အ စား(၇၅.၃)ကီလိုဗိုက်။ (75.3)KB pdf file application. ဤဘ၀၏ဟိုမှာဘက်တွင် - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ကျမ်းပြုဆရာဦးအေးနိုင်
၏အတိတ်ဘ၀အကြောင်းကို ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်က မေးမြန်း၍ ရေးသားတင်ပြထား​သောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၀၂)ကီလိုဗိုက်။ (202)KB pdf file application. ကေလာသတောင်သို့ - မာဃ
၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ၌လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၃၈)ကီလိုဗိုက်။ (238)KB pdf file application. နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ - ဦးကျော်၀င်းဦး
၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ နတ်ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော အကြောင်းအရာများကို ဆောင်းပါးအဖြစ်ပြန်လည်တင်ပြထား
ပါသည်၊ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၄)ကီလိုဗိုက်။ (244)KB pdf file application. ဇမ္ဗုပတိမင်းချွတ်ခန်း - ဓမ္မာစရိယဦးအေးနိုင်(ဘီ-အေ)
၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၂၃၂)ကီလိုဗိုက်။ (232)KB pdf file application. အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် လယ်တီဒီပနီများ - မြင့်ဆွေ
၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော လယ်တီဒီပနီဘာသာပြန်များအ ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၀၈)ကီလိုဗိုက်၊ (108)KB pdf file application. နတ်နဂါးနှင့်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ - မင်းရှိန်အောင်
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ကိုးကွယ်မှုအယူဝါဒဆိုင်ရာလေ့လာ
ချက်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၃.၃)ကီလိုဗိုက်။ (63.3)KB pdf file application. သူရဿီပြဿနာ ၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ဗုဒ္ဓဓမ္မလောကမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သူရဿီနတ်သမီး
တကယ်ရှိ မရှိဟူသော ပြဿနာကို ဆရာတော်ကြီးများမှ ကျမ်းကိုးကျမ်းကားနှင့်ပြန်လည်
ဖြေဆို အဖြေပေးရှင်းလင်းပြထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၅၃)ကီလိုဗိုက်။ (253)KB pdf file application. ဘုံကျွန်နှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကံကြမ္မာဆန်းများ - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေ သော လူတိုင်းသတိထား ဂရုပြုရမည့်သံဝေဂရဖွယ် သနားစဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါ
သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၆၄)ကီလိုဗိုက်၊ (164)KB pdf file application. သိမ်ဒါယကာကျွဲပေါက်ကြီးနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကံကြမ္မာဆန်းများ - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆန်းကြယ် သနားစဖွယ် သံဝေဂရဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်း များကို ဆရာတော်မှ ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်၍ ရေးသားတင်ပြထားသော စာ အုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးလူငယ် သတိပြု အလေးမူသင့်သောအချက်များကို
မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။ လူတိုင်းဖတ်သင့် လိုက်နာသင့်သောစာအုပ်ကောင်းဖြစ်ပါ သည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၆၄)ကီလိုဗိုက်၊ (164)KB pdf file application. စိတ်တူကိုယ်တူနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကံကြမ္မာဆန်းများ - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ် ဝေသော ဖြစ်ရပ်မှန်ဆန်းကြယ် သံဝေဂရဖွယ် သနားစဖွယ်ကောင်းလှသော အဖြစ်အပျက် များကို ရေးသားတင်ပြထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ် အစား(၁၆၁)ကီလိုဗိုက်။ (161)KB pdf file application အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၀၁-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှထုတ် ဝေသော လူငယ်မောင်မယ်များ အိမ်ထောင်ပြုတော့မည်ဆိုပါက လိုက်နာသင့်သည့်အချက် များကို ဘုရားဟောနှင့်တိုက်ဆိုင်ကိုးကား၍ မီးမောင်းထိုးပြထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၄၄)ကီလိုဗိုက်၊ (144)KB pdf file application. မနုဿီဟ - ဦးသော်ဇင်
၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၌ ထုတ်ဝေသော ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၂၀၁)ကီလိုဗိုက်၊ (201)KB pdf file application. စောင်းချင်း - ဦးသော်ဇင်
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်၊ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၃၇)ကီလိုဗိုက်။ (237)KB pdf file application တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် - ဂန္ဓာရုံဘုံကျော်ဆရာတော်ဓမ္မဝိလာသ
၂၀၀၉-ခုနှစ် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ယုံကြည်ချက်စာပေမှ ထုတ်ဝေလိုက်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်
။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၁၃)ကီလိုဗိုက်။ (113)KB Pdf file application. မိဘဂုဏ်ရည်နှင့်သားကောင်းသမီးမွန် - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၆၁)ကီလိုဗိုက်။ (161)KB pdf file application. အရေးတော်ပုံကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်ရေး မလုပ်ရေးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာမလုပ် ရန်အတွက် မွတ်ဆလင်နှင့်ခရစ်ယာန်တို့က ဝိုင်း၀န်းကန့်ကွက်သော စာတန်းဖြစ်ပါသည်။ ဗဟုသု တလိုလားကြကုန်သော အမျိုးကောင်းသားအပေါင်းတို့ သိရှိလေ့လာနိုင်စေရန် ပြန်လည်ဝေမျှပေး လိုက်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၆၁၆)ကီလိုဗိုက်။ (616)KB pdf file application. မိဘကို စော်ကား၍ မြေမျိုကြသူများ - ဦးထွန်းလှ(ဝိဇ္ဇာ-သမိုင်း)
၂၀၀၁-ခုနှစ် စံလှစာပေတိုက်မှ ထုတ်ဝေသော မိဘကို ပစ်မှားကြသူများ၏အကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို တင်ပြထားသော လူတိုင်းဖတ်ရှုသင့်သည့်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ် အစား(၃.၁၁)မီဂါဗိုက်။ (3.11)MB pdf file application. မိတ်ဆွေကောင်းကို ရှာနေသလား - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၀-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်သော လောက၌ မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းသည် အရေးကြီးပုံကို ပုံပြင်များနှင့် ဖတ်ချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးသားထားသော စာအုပ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၇၂)ကီလိုဗိုက်။ (272)KB pdf file. လမ်းပေါ်မှာ လမ်းပျောက်နေသူများ - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ မေလတွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသော ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် အယူဝါဒမှားယွင်းခဲ့၍ ငရဲသို့ မရောက်သင့်ဘဲ ရောက်ခဲ့ရသော သုန္ဒရီပရိဗိုဇ်မကို စံတင်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်သည့်သင်ခန်းစာများကို ရေးသားတင်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၈၀)ကီလိုဗိုက်။ (180)KB pdf file. ကျောချင်းခိုင်း၍ မျက်နှာချင်းဆိုင် - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၁-ခုနှစ် မေလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်သော လောက၌ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွဲခွါကြရသော ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များရှိသည်မှာ သဘာ၀တရားပင်ဖြစ်သော်လည်း အရှင်မဟာကဿပအလောင်းလျာ ပိပ္ပလိလုလင်နှင့်ဘဒ္ဒါကာပိလာနီတို့နှစ်ဦးသား ခွဲခွါခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အမွန်မြတ်ဆုံးသောနည်း လမ်းဖြင့် မျက်နှာချင်းပြန်လည်ဆိုင်ခဲ့ရပုံကို တရားသဘောနှင့်ရေးသားထားသည်ကို ဖတ်ရပေမည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၂၆၇)ကီလိုဗိုက်။ (267)KB pdf file. ငရဲရောက်အောင်မုန်းတဲ့မိန်းမချော - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၀၉-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေလိုက်သော စာအုပ်ဖြစ် ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ဘုရားရှင်အား ရန်ငြိုးဖွဲ့သူ မာဂဏ္ဍီအမျိုးသမီးသည် သံသရာတွင် ဆင်းရဲပင်ပန်း စွာ ငရဲတွင်ကျရောက်ခံနေရသည့်အကြောင်းကို သံဝေဂရဖွယ်ရာ ကြောက်ဖွယ်ရာကောင်းလှသည့်အကြောင်း ကို ရေးသားတင်ပြထားသည်မှာ လေ့လာဖတ်ရှု၍ ရှောင်သင့်သည်ကို ရှောင်၍ လိုက်နာသင့်သည်ကို လိုက်နာ သင့်သည့်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၉၄)ကီလိုဗိုက်။ (294)KB pdf file. တလခုံဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်း - မောင်မဲ
၁၉၈၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌ လာရှိသော ယိုးဒယားနှင့်မြန်မာနယ်စပ် ဒေါနတောင် တန်းရှိ ထီးမော်ရွာကလေးရှိ ကရင်တလခုံဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို တင်ပြထားသော သမိုင်း ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၀.၁)ကီလိုဗိုက်။ (80.1)KB pdf file. ထို့ကြောင့် ဤအရာကို အချစ်ဟုခေါ်သည် - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
၂၀၁၁-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ပြည်မြန်မာစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေလိုက်သော ပေမတဏှာ အချစ်နှင့်မေတ္တာတို့ ကွာခြားပုံအခြင်းအရာ၊ တဏှာ၏ပူလောင်ပုံနှင့်မေတ္တာ၏အေးမြပုံတို့ကို ဖွင့်ဆိုရေးသား ထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၃၄)ကီလိုဗိုက်။ (334)KB pdf file. ကျေးဇူးမြင်းမိုရ် ပြိုမှာစိုးမိ - ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ(ITBMU)
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် အပ္ပမာဒဓမ္မရသမဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၁၁၁)ကီလိုဗိုက်။ File size (111)KB pdf file application. Uploaded by 20-8-2012. အယူဝါဒကွဲပြားမှု - မွန်းဓါတု
၁၉၇၄-ခုနှစ် ဧပြီ-မေလထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ စာစီ ရိုက်ထားပါသည်။ အရွယ်အစား(၁၀၄)ကီလိုဗိုက်။ File size (104)KB pdf file application. Uploaded by 28.8.2012. ပထမပြန်စာမေးပွဲနှင့်မြန်မာစာ - မြင့်ဆွေ
၁၉၈၄-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ကာ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၆၀)
ကီလို​ဗိုက်။ File size (160)KB pdf file application. Uploaded by 5.10.2012. ပထမပြန်သုံးလယ်တီစာပေများ - မြင့်ဆွေ
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်
စာစီရိုက်ကာ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်စား(၁၅၉)ကီလို​ဗိုက်။ File size (159)KB pdf file application. Uploaded by 5.10.2012. အနောက်တိုင်းဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်း၏ဩဇာ - မြင့်ဆွေ
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း၌ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်၍
စာစီရိုက်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၆၅)ကီလိုဗိုက်။ File size
(165)KB pdf file application. Uploaded by 5.10.2012. သံဃာ့ဂိုဏ်းကြီး(၉)ဂိုဏ်းအကြောင်းအကျဉ်းချုပ် - တင်အောင်သွင်
၁၉၈၈-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် သဒ္ဓမ္မရောင်ခြည်​စာစောင်တွင်ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ထားခြင်းဖြစ်
ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၉၅.၄)ကီလိုဗိုက်။ File size (95.4)KB pdf file application. Uploaded by 12.11.2012. «
နောက်တိုး ပါဠိတော် ဝတ္ထုငါးပုဒ်
ငရဲနှင့် နတ်ပြည် (Hell and Heaven)
ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး ပန္နက်ချပွဲ
ဗုဒ္ဓရောင်ခြည်တော်နှင့် ပုဂံမြို့ - ရွှေစကြာဦးစိုးမြင့်
နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင် - ဦးသော်ဇင်
ကွန်ရက်စာမျက်နှာ တခု တည်ဆောက်ခြင်း (CreatingaWeb Page)